किन झर्‍यो आस्था रावतको आँखाबाट बलिन्द्र आँशु स्टुडियो मै ? रोक्नै नसकिने भावुक त्यो पल! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > किन झर्‍यो आस्था रावतको आँखाबाट बलिन्द्र आँशु स्टुडियो मै ? रोक्नै नसकिने भावुक त्यो पल! (भिडियो सहित)
किन झर्‍यो आस्था रावतको आँखाबाट बलिन्द्र आँशु स्टुडियो मै ? रोक्नै नसकिने भावुक त्यो पल! (भिडियो सहित)
admin January 31, 2020 भिडियो, समाज	0
माघ १७, काठमाण्डाैं । विमानस्थलमा एक प्रहरी अधिकृतसँग भएको सामान्य असमझदारी र त्यसविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल दिएको अभिव्यक्तिपछि विवाद परिन् गायिका आस्था रावत । त्यही प्रकरणले समाज उनको पक्ष विपक्षमा उभियो । प्रहरी प्रशासनले आस्थाविरुद्ध प क्रा उ पूर्जी मात्र काटे नपक्रेर हिरासत सम्मै पुर्‍यायो । के थियो वास्तवमै त्यो प्रकरण ? किन पुग्नुपर्‍यो आस्थालाई प्रहरी हि रास तस म्म ? कुन त्यो कारण थियो र यसरी स्टुडियोमै यसरी रोइन ।
आस्था सम्पूर्ण जिज्ञासाका लागि हेर्नुस् यो अन्तर्वार्तामा आस्थाकै आवाजमा के के भनेकि छिन् ।
बन्दीपुर जाँदै हुनुहुन्छ ? पहिले खबर गर्नुस है बास नपाइएला
तनहुँ । बन्दीपुरमा रहेका होमस्टेहरु यतिखेर पर्यटकले भरिभराउ छन् । पर्यटनको उपयुक्त गन्तब्यको रुपमा लिने गरिएको होमस्टेमा पर्यटकको भिड बढेपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयमा खुसी छाएको छ ।तनहुँको पर्यटकीय क्षेत्र बन्दीपुर आएका पर्यटक भित्र्याउन यहाँका होमस्टेलाई भ्याइनभ्याई छ । केही समययता बन्दीपुरमा दैनिक चार–पाँच सय पर्यटक पुग्ने गरेका छन् ।
जसको पहिलो आकर्षण होमस्टेनै हुने गरेको छ । गत वषमात्र्र डेढ लाख पर्यटक बन्दीपुर आएका थिए । आफैंमा पनि सुन्दर र सफा भएकाले पनि यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरु बन्दीपुर प्रति आकर्षित हुने गरेका हुन् ।बजार क्षेत्रमा बिछ्याइएको ढुङ्गा र कलात्मक बुट्टेदार घर त्यहाँको मुख्यआकर्षण हो । घुम्न पनि पाइने र होमस्टेको अनुभव बटुल्न पनि पाइने भएकाले उनीहरुको रोजाइमा बन्दीपुर पर्ने गरेको छ ।
यहाँ पुग्ने पाहुनाहरुले फुलमालासहित स्थानीय कला, संस्कृति र अर्गानिक खानाको स्वाद लिन सक्ने छन् । बजार क्षेत्रमा सञ्चालित चार वटा होमस्टे पछिल्लो समय भरिभराउ हुन थालेका छन् ।त्यसैले होमस्टेमा बस्न चाहने पाहुनाहरु पहिले नै खबर गरेर आउँदा सहज हुने विन्दबासिनी होमस्टेकी अध्यक्ष शान्ती कायस्थ बताउँछिन् । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएकाले गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि होमस्टेलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बन्दीपुरमा रहेको सामुदायिक होमस्टेको केहि दीन अगाडी गण्डकी प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले उद्घाटन गरेका थिए ।फुर्र्सिदला महिलाहरु मिलेर संचालन गरेको होमस्टेले आयस्तरमासमेत वृद्धि भएको बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष बैस गुरुङको भनाइ छ ।जाडोको समयमा पनि खासै चिसो नहुने र गर्मीको समयमा पनि चिसो हावा चल्ने भएकाले अधिकांशको
रोजाइमा यो ठाउँ पर्ने गरेको छ ।होमस्टेलाई प्रबद्र्धन गर्न गाउँपालिकाले समेत सहयोग गर्दै आइरहेको बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत नरहरी सापकोटा बताउँछन् ।होमस्टेबाटै स्थानीयले अहिले मासिक तीस हजारसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । होमस्टेको प्रबद्र्धन गरी ग्रामीण भेगका स्थानीयको आयस्तर बढाउन विभिन्न प्याकेज बनाइ भरपुर मनोरञ्जन दिनु आवश्यक छ ।यसबाट नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० लाई सफल बनाउनसमेत टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
गोरखामा दुध बेच्न हिडेकि चेलीकाे टिप्परले लियो ज्यान, स्थानियले जलाए टिप्पर
यस्ता सासुससुरालाइ सम्मान गर्नुपर्छ, छोरो २४ बर्षमै निधन भएपछि बुहारीको घरबाटै यस्तो धुमघाम सहित गरिदिए बिहे, सम्मान स्वरूप शेयर गराैं